Cubot P40 ga-abịa na May 18 na Budget King quad igwefoto | Gam akporosis
Ngwaọrụ mkpanaka ruo ọtụtụ afọ na-enwe nnukwu ọganihu na teknụzụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agba mbọ iji R&D na-enwe ike na-enye ndị ọhụrụ na ha igwe, dị mkpa ma ọ bụrụ na ị chọrọ inye a ọnụ na mkpa atụmatụ na a gbanwee price.
Taa Cub ekwuputala ụbọchị ngosi nke ọkwa ọzọ nke ụlọ ọrụ, Cubot P40. Ekwentị ga-abata na May 18 yana ihe ntanetị anọ na azụ na aha nke Quad-igwefoto emefu ego Eze na onye arụmọrụ ya ga-abụ ihe dị ịrịba ama ma a bịa n'ịse foto na ịme vidiyo na oke mma.
1 Ihe niile Cubot P40 ọhụrụ na-enye anyị
2 Igwefoto L-ekara na Sony IMX486 AI Quad Camera sensor
3 Android 10 dị ka sistemụ arụmọrụ
4 Mpaghara 10 maka ihu maka ndị chere na ọnụ ahịa ahịa ụwa nke Cubot P40 ga-ere ire na-esote Mee 18
Ihe niile Cubot P40 ọhụrụ na-enye anyị
Ọhụrụ Cubot P40 ekpughewo njirimara ya niile, gụnyere Ihuenyo 6,2-inch na LTPS teknụzụ pụtara ìhè, bụ teknụzụ ihuenyo ewepụghị maka ngosipụta dị elu ma na-enye obere ike oriri. Na nke a, ọ ga-eje ozi ka ihuenyo nwere ike ịrụ ọrụ zuru oke na njiri kacha ike nke batrị.
Ekwentị a nwekwara batrị zuru oke iji nye P40 ndụ karịa 24 awa, batrị agbakwunyere bụ 4.200 mAh. Otu ihe dị mma bụ na ụlọ ọrụ ahụ kwadoro na batrị nwere ike iwepụ, ya mere enwere ike dochie ya n'oge ọ bụla site na onye ọzọ n'ọdịnihu.
Cubot P40 nwere nhazi nke 4 GB nke Ram na nchekwa bụ 128 GB, ihe karịrị iji nwee ike ịchekwa ọtụtụ onyonyo, akwụkwọ na vidiyo. Dabere na Cubot Facebook, ụdị a ga - abụ ekwentị kachasị ọnụ, yabụ ama ama ama ama.
Igwefoto L-ekara na Sony IMX486 AI Quad Camera sensor
Onye nrụpụta Asia kpebiri ịkụ nzọ na nhazi igwefoto quadruple na azụ, lenses dị oke mkpa iji nweta arụmọrụ kacha mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịse foto n'oge ọ bụla na gburugburu ebe obibi. Igwefoto azụ bụ isi ihe mmetụta 12 MP na Sony enyere aka na oghere elekere atọ.
El Cubot P40 ama Na ihu, ọ ahọrọla ihe mmetụta 20 megapixel sitere na Samsung, nke kachasị mma maka onyonyo kachasị mma na foto ụdị onwe, vidiyo na nnọkọ vidiyo. Ngwakọta nke Sony na Samsung lenses na-eme ka ọ na-enwu maka ogo ikpeazụ nke ihe oyiyi.
Enwere ike ịhụ na ese foto na-abịa n'ụdị L iji wepụta ohere nke ohere ma weghara onyonyo kachasị mma, ma ya na onye isi na ndị na-akwado Sony lens. N'akụkụ aka nri ọ na-egosi Flash ọkụ nke iji kwado anyị n'ọnọdụ ndị anyị chọrọ ọkụ ma mee ka ngosipụta ọ bụla echekwara na nchekwa anyị na-enwu.
Android 10 dị ka sistemụ arụmọrụ
Ekwentị Cubot P40 ga-abịa na ụdị kachasị ọhụrụ nke gam akporo na ihu, onye a họọrọ bụ Android 10 n’ụzọ dị ọcha na enweghị ngwa ndị ọzọ etinyegoro ya. Ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta arụmọrụ kacha mma site na smartphones ma enwere ọtụtụ ndị kpebiri ime nke ahụ ka onye ọrụ nwere ike ịhọrọ ngwa nke ịwụnye na nke na-abụghị.
Na gam akporo 10 na-enweta nnweta ka mma ebe ọ bụ na ọ na-arụ ọrụ dịka Live Caption, Live Transcribe, ampilifaya ụda, ndozi na ngalaba foto, ọnọdụ elekwasị anya (usoro iji gbochie ngwa ngwa nwa oge) na ọnọdụ gbara ọchịchịrị ama ama (Ọnọdụ gbara ọchịchịrị), n'etiti ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ.
Cubot site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị na-enye nkwado nkwado na ekwentị niile dị na katalọgụ sara mbara ọ nwere. Enye ikike budata nkwụsi ike nke ngwaọrụ ndị ọzọYa mere, odi nkpa inwe ike idobe mmecha gi.
Mpaghara 10 maka ihu maka ndị chere na ọnụ ahịa ahịa ụwa nke Cubot P40 ga-ere ire na-esote Mee 18
Cubot ga-enye nkeji 10 site na nnukwu onyinye maka ndị mmeri iji nwalee ngwaọrụ ma gwaa ndozi. Iji sonyere na ndị mmeri, ị ga-echerịrị ọnụahịa zuru ụwa ọnụ nke ekwentị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ekwentị, ịnwere ike ịgbakwunye ya na ụgbọ ibu na AliExpress ka amara gị ọkwa mgbe ire ahụ malitere.
E wezụga nke a, dị ka ihe osise a na-eme site na ikpo okwu Gleam.io, cannwere ike ịgbakwunye ọbụna isi ihe ndị ọzọ na-asụgharị gaa ọtụtụ ohere site na ịme omume dịka ịgbaso Cubot na YouTube, Instagram, Facebook na Twitter.
?? Soro na raffle site na ịpị ebe a ??
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Cubot P40 ga-abịa na May 18 na igwefoto quad King Budget